Diinagdee - BBC News Afaan Oromoo
Bara 2011tti kontrobaandiin birri bil. 1.4 baasuu to'atame
Bara 2011'tti meeshaaleen kontrobaandiin birri bil. 1.4tti tilmaamamu to'annoo jala olfamuufi kanumaan walqabatees namootni 1000 qabamanii seeratti dhiyyeeffamunsaanii Ministeerri Galiiwwan Itoophiyaa beeksise.
Bara 2019 keessa miidhaan bunarra ga'aa jiru akkatti dhala namaa miidhuu danda'u
Addunyaarratti gatiin bunaa hir'achuun qonnaan bultoota buna oomishan miidhaa jira, gatiin buna dhugamuu maaliif dabalaa jiraa?
Zimbaabween maallaqa biyyoota biroorratti maaliif qoqqobbii keette?
Maallaqni biyyattii qaala'insa jireenyaatiif sababa waan ta'eef murteen kun lammiilee hedduu naasiseera.
Karoorri dhaabbilee gurguddoo harka mootummaa turan sududaan gara abbootii qabeenyaa dhunfaatti dabarsuuf mootummaan Itoophiyaa itti jiru ogeeyyii diinagdee fi siyaasaa gargar qoodee jira.
Dhaabbileen mormitootaa Keeniyaa maallaqa haaraa Baankiin Gidduugaleessaa Keeniyaa maxxansiise fudhatama hin qabu jechaa jiru.
Oditara Muummee Federaalaa: Ragaan guutuu osoo hin dhihaatin Birriin biiliyoona 1.4 ol baasii ta'eera
Ragaan guutuu osoo hin dhihaatin biiliyoona 1.4 caalaa baasii Oditara Muummee Federaalaa Obbo Gammachuu Dubbisoo har'a mana maree Bakka Bu'oota Ummataatti dhihaachuun himan.
Saawudi Arabiyaan haala Suudaan keessatti argamtu deeggaruuf maallaqa olaanaa kenniteef.
''Warshaalee gurguruu dura seerotaafi labsiiwwan baasuu feesisa''
Itoophiyaan warshaalee sukkaaraa 13 guutummaan ykn gar-tokkeen gurguruuf akka jirtuu dhiheenya beeksiftee jirti. Dhimma kana ilaalchisuun oggeessoota dubbifne akkas jedhu.
13 Caamsaa 2019
Itoophiyaan hanqina kuufama sharafa biyya alaa ishee mudate keessaa bahuuf alergiirratti xiyyeeffachuu, humnashee madaaluun gabaa addunyaarratti hirmaachuufi lammiileeshee biyya alaa jiranitti fayyadamuu qabdi jedhu ogeessi dinagdee.
Humni bilisummaa hawaasa tokkoo cimina dinagdeen hidhata waan qabuuf sabni dinadgeen hin cimne karaa kamiinuu bilisa jechuun rakkisaa akka ta'e himu oggeessoonni.
Waggaa 1ffaa Abiy Ahimad: Erga MM aangootti dhufanii maaltu jijjiirame?
MM Abiy Ahimad ministira mummichaa Itoophiyaa ta'uun erga gara aangootti dhufanii waggaa guutuuf guyyoota muraasa qofatu hafa. Yeroo kana keessatti taateewwan hedduun raawwatamaniiru.
Bulchaa Dammaqsaa: Paarlaamaa keessa yeroo jalqabaaf Afaan Oromootiin nama dubbatan
Yeroo bulchiinsa Hayilasillaasee itti aanaa ministeera Maallaqaa kan turanii fi bara bulchiinsa Mallas ammoo paarlaamaa keessatti Afaan Oromootiin dubbachuun kan beekaman Obbo Bulchaa Dammaksaa turtiin BBC waliin taasisan dubbifadhaa.
MM Abiy Ahimad haasawa Foramii Diinagdee Addunyaarratti taasisaniin, riiformiin Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru falaasama 'ida'amuu' irratti kan hundaa'e dha jedhan.
Jimaa oomishuu, daldaluu, bakkaa bakkatti geessuun namoonni jireenya isanaii godhatan akkuma jiran miidhaan hawaasummaa dhaqqabsiisu immoo jimaa dhorkuu yaada jedhu ijoo dubbii godheera.
Suudaan: Mootummaan jeequmsa biyyitti keessaa qabaneessuuf hojjettotaa miindaa dabaluuf
Hanqinni boba'aa fi daabboo Sudaanitti mormii hamaa kaasee lubbuu namoota galaafateera.
Hirina sharafa biyyaa alaa biyyattii mudatu to'achuuf daladltoota admassuurra filannoowwan biraa ilaaluun furmaata waaraa ta'u mala jedhu oggeessi dinagdee.
Itoophiyaa: Omishni jikita boba'aa Ogaadeen dhaabbate jedhame
Omishni jikita boba'aa naannoo Somaalee Ogaadeenitti sadarkaa yaalitti oomishamu eegalamee ture adda cituu isaa Ministirri Albudaa fi Boba'aa beeksise.
Yaa'iiwwan biyyoonni dinagdeen guddata waggaan irratti walgahuun irratti marii'atan keessaa tokko Garee 20'ti. Yaa'iichi Itoophiyaafi biyyoota biraatiif maal argamsiisa?